Apt 16-Tirana kakhulu Central Apartment
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguOlsi
Iflethi yethu isembindini kakhulu. Ngendawo yayo yeemitha ezingama-200 ukusuka eSkanderbeg Square- yonke iTirana ilungile kumnyango wakho. Sinempahla yokunxiba iflethi ukuze ikhululeke kwaye ilungele abahambi kangangoko. Indlu ihlaziywe ngokupheleleyo ngoJuni 2018. Kukho amagumbi amabini okulala, igumbi lokuhlala elikhululekile kunye neTV enkulu, kunye nekhitshi esebenza ngokupheleleyo. Ikhaya lethu liya kuba lilungele iqela labahlobo, iintsapho okanye izibini ezijonge ukuhlola iTirana!
Iflethi ikumgangatho wesithathu webloko yeeflethi kwaye nceda uqaphele ukuba akukho lift. Emva kwezitepsi nangona uya kunyangwa kwindawo encinci yokuzola esiyidalileyo ukuba ilungele naziphi na iimfuno zakho njengomhambi!
Kukho amagumbi amabini okulala, elinye linebhedi yendlovukazi kunye nelinye lineebhedi ezitsalayo. Uya kubonelelwa ngeelinen ezikumgangatho wehotele kunye needuvethi ezitofotofo kunye nemiqamelo. Kukwakho nomqeqeshi kwigumbi lokuhlala esibonelela ngeeduvethi kunye nemiqamelo eyongezelelweyo. Kukho indawo eninzi yewodrophu yokuxhoma kunye nokugcina zonke izinto zakho, kunye nentsimbi esemgangathweni kunye nesomisi seenwele.
Kukho amagumbi okuhlambela amabini kwigumbi lokuhlambela. Uya kunikwa iitawuli ezinkulu ezimhlophe ezifukufuku kunye nezinto zangasese.
Ikhitshi inazo naziphi na izixhobo ezisisiseko onokuzifuna xa upheka isidlo, kuquka iimbiza neepani, imicrowave kunye nomatshini wokuhlamba izitya.
Igumbi lokuhlala linetafile yokutyela ehlala abantu abane, ibhedi enkulu, kunye ne-TV. Ukuba ufuna nantoni na eyenye ukunceda ukwenza ukuhlala okuthandekayo nceda usazise kwaye singakuvuyela ukukunceda.
4.88 · Izimvo eziyi-164
Iflethi yethu isembindini kakhulu. Ngendawo yayo yeemitha ezingama-200 ukusuka eSkanderbeg Square- yonke iTirana ilungile kumnyango wakho.
Umbuki zindwendwe ngu- Olsi
Xa ufika siya kuqinisekisa ukuba uziva usekhaya ngokukhenketha ngokufutshane kwendawo yokulala ukukunceda ukuba uzinze. Emva kohambo olufutshane kwindawo yokulala uya kushiywa ukuba wonwabele indawo njengeyakho. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo kunye nemibuzo emva kokuba sihambile sihlala silahla amatye kwaye siqhagamsheleka ngefowuni okanye nge-imeyile.
Xa ufika siya kuqinisekisa ukuba uziva usekhaya ngokukhenketha ngokufutshane kwendawo yokulala ukukunceda ukuba uzinze. Emva kohambo olufutshane kwindawo yokulala uya kushiywa ukub…